Sos Village d’enfants sy ny Fondation Orange : misokatra ho an’ny rehetra ny Fablab Mamiratra | NewsMada
Sos Village d’enfants sy ny Fondation Orange : misokatra ho an’ny rehetra ny Fablab Mamiratra
Mahasarika tanora ny asa manaraka ny fivoaran’ny teknolojia moderina. Izany indrindra no hisokafan’ny Fablab ho an’ny rehetra etsy amin’ny Sos Village d’enfants etsy Andrainarivo.
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny Sos Village d’enfants de Madagascar Andrainarivo ny fisokafan’ny Fablab solidaire Mamiratra ho an’ny tanora rehetra liana amin’ny fampianarana nomerika.
Fitaovana manaraka ny hiaka farany eo amin’ny teknolojia ity Fablab ity ary afaka hamokarana zavatra maromaro toy ny sary an-taratasy voavoatra na 3D ireny.
Nanomboka omaly ary hitohy hatramin’ny rahampitso araka izany ny varavarana misokatra eny an-toerana izay hahafahan’ny rehetra mitsidika sy mamantatra ity teknolojia avo lenta iarahan’ny Fondation Orange sy ny Sos Village d’enfants miara-miasa ity.
Nanotrona ny fanokafana ny varavarana misokatra omaly ny filohan’ny Orange solidarité Madagascar Randriambeloma Josie sy ny filohan’ny Sos Village d’enfants de Madagascar Raharinarivonirina Maria.
Marihina fa natao ity Fablab ity, hahafahana mitarika ny tanora amin’ny asa mifandraika amin’ny teknolojia moderina izay tsy dia mbola mivelatra loatra eto amintsika. Natao ihany koa hanamorana ny fahafahan’ny tanora miditra eo amin’ny sehatry ny asa.
Misy ny fampiofanana tsotra omena ireo tanora mahakasika ity fampiasana ny Fablab ity. Fotoana hahafahana manontany ireo mpampiofana ny lalana tokony aleha sy torohevitra tsara ho fantatra mahakasika ny asa mifandraika amin’ny teknolojia moderina.
Efa hatramin’ny novambra 2015 ny Fablab no nampiasain’ny tanora tao amin’ny Sos Village d’enfants izay iarahana amin’ny Fondation Orange.